ပြင်ပမြို့ရိုးကိုအသွင်အပြင် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
2020 ခုနှစ်တွင်ကကြောင်းအကြံပြုသည် ပြင်ပမြို့ရိုးကိုအသွင်အပြင် ပြင်ဆင်ပေးခြင်းခြယ်ရောင်စုံယွန်းနှင့်အတုကြောကျခဲဆေးသုတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်း, ဖြိုဖျက်မရသင့်ပါတယ်။ ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု coating ဂျပန်နိပွန် Paint နှင့်အတုကြောကျခဲဆေးသုတ်ပေးသည်ကို၎င်း, ပြင်ပမြို့ရိုးကိုအသွင်အပြင် ဖယ်ရှားမပေးပါ။ နည်းပညာနိပွန် Paint ၏တင်းကျပ်သောစံနှုန်းများကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်း, ထိုကဲ့သို့သောစကျင်ကျောက်, ကျောက်များနှင့်အတုမျက်နှာစာအဖြစ်သဘာဝအ facing ကျောက်အပါအဝင်သင့်ရဲ့အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုမဆိုအပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုအလှဆင်များအတွက်အသုံးပြုရနိုငျသညျ, ကြွေအဆိုပါအပြင်မြို့ရိုးအကြွပ်ကိုတုပဖြစ်ကြသည် မူလသဘာဝကဖုန်နီးပါး, ပျက်စီးကြောင်းအကြမ်းခံများနှင့်ယဉ်ပါးဖြစ်နဲ့ off လဲကြနိုငျသောအရောင်, အဆင်းလှခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်း။ အဆိုပါကုန်ကြမ်းအတွက်အပြည့်အဝအဆောက်အဦး၏ကြွယ်ဝသောနှင့်ဇိမ်ခံလေထုဖော်ပြနိုင်သည့်မူရင်းကျောက်သည်လည်း, ရောင်စုံဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်အတုပိတ်သောကျောက်ကိုလွန်ကဲပြီ။ တောက်ပခြင်းနှင့်ရောင်စုံအရောင်ကြွယ်ဝ paint, ကြွယ်ဝသောနှင့်ကျယ်ပြန့်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကျက်သရေနှင့်အတူအရောင်စကားရပ်နှင့်သည်လည်းနှင့်လှုပ်ရှား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဒီဂရီကွဲပြားခြားနားအပေါ်အခြေခံပြီးရနိုင် ပြင်ပမြို့ရိုးကိုအသွင်အပြင် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးရန်ကွဲပြားခြားနားသောရောင်စုံဆေးသုတ်အရောင်များကိုအသုံးပြုပြီး, ဆောင်ပုဒ်ပန်းချီ။ တချို့ကထက်မြက်၏ပြည့်လျက်ရှိကြ၏, လှပသောအရောင်များအချို့တည်ငြိမ်ပြီးဂုဏျသိက်ခာရှိရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အချို့လွင်ပြင်နှင့်စုံစုံ, ဓမ္မဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
အထူးအော်ဂဲနစ် Filler အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ပက်ဖြန်းပြီးနောက်သူတို့က high-ထူရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိသောမီးရှို့ရာကျောက်ကြမ်း texture ကဲ့သို့ဖြစ်၏, နှင့်ကျောက်ကဲ့သို့ရောင်စုံဆေးသုတ်၏အပေါ်ယံပိုင်းသုံးဖက်မြင်ဒီဇိုင်းကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
1.5mm ပေါ့ပါးအပေါ်ယံပိုင်းရုပ်ရှင်, ပစ္စည်းသောက်သုံးသောအဆောက်အအုံ၏အဓိကကိုယ်ထည်၏ဝန်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲတည်ဆောက်ရေးကာလကိုအတိုကောက်နိုင်သည့်, ချွေတာခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာဖျန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာချွတ်ကွာကျသွားနှင့်အခြားဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမပါဘဲမဆိုအဟောင်းအပြင်မြို့ရိုးကိုပစ္စည်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
ပြင်ရိုးအကောင်းဆုံးဂျပန်နိပွန်ရောင်စုံဆေးသုတ်၏ဖန်ဆင်းထားသည်,မြင့်မားတဲ့ရာသီဥတုဒါဏ်ပေါ်လီမာဝင်းနှင့်ကြွေထည်ပစ္စည်း glaze အမှုန့်နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်,ရေ-အခြေစိုက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး,မဟုတ်တဲ့-အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်အရသာမရှိသော,Formaldehyde-အခမဲ့,ကောင်းသော elasticity,ဆန့်ကျင်-ကွဲအက်,မြင့်မားသော texture,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကော်တပ်ဖွဲ့နှင့်ရေခုခံ,dustproof နှင့်ဆန့်ကျင်-ရေညှိ,အဆောက်အဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်အောင်,ရိုးရှင်းတဲ့အပေါ်ယံပိုင်းနည်းလမ်းနှင့်အတူ,အမျိုးမျိုးသောကြောကျခဲလိုင်းများမျိုးပွား,လိုင်း 500 ကျော်မျိုးနှင့်အတူ,100 ကိုရရှိ%စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း.
100 အ%ဗဓေလသစ်အပေါ်ယံပိုင်း,သဲနှင့်ကျောက်စရစ်အဘယ်သူမျှမ,ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိဘဲချောမွေ့မျက်နှာပြင်,အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ stretchability ခြေရင်းအလွှာတွင်အသေးစားဒါကိုတော့တက်သည်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်,လေထုညစ်ညမ်းမှုမှအဆောက်အဦးများကိုခံနိုင်ရည်အောင်,ရေနှင့်ရာသီဥတု,ပြီးပြည့်စုံသောအဆောက်အဦအပြင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေး.
1.ပန်းချီပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်:ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ 85 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်သင့်%,ပန်းချီမီနှင့်အပြီး 24 နာရီအဘို့မိုဃ်းရွာစေခြင်းမရှိ,အဘယ်သူမျှမငွေ့ရည်ဖွဲ့,5 မှာကျဆင်းအပူချိန်°ကို C~50°ကို C,ဆောက်လုပ်ရေး၏နေ့၌နှင့်ကောင်းမွန်သောရာသီဥတုအခြေအနေများ.
2.ယင်းအလွှာဟာအဆင့်အတန်းအတည်ပြုချက်:ထိုကဲ့သို့သောအက်ကွဲပေါက်အဖြစ်ချို့ယွင်းချက်အပြည့်အဝပွညျ့ခဲ့ကြပြီကိုအတည်ပြု,ယင်းအလွှာဟာ၏မျက်နှာပြင်သန့်စင်ထားပြီး,ကွန်ကရစ်အစိုဓာတ်ကို content တွေကို 10 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါသည်%,နှင့် pH တန်ဖိုး9အောက်.
3.ယင်းအပေါ်ယံပိုင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ထိန်းချုပ်ရေး:လွင်ပြင်ညှိနှိုင်းမှု၏အတည်ပြုချက်,ပန်းချီကား tools များ၏နှစ်ဆအတည်ပြုချက်ကို,ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများ,ဆေးတခါသောက်,အကြား...,တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ယံပိုင်း၏ပြီးစီး၏အတည်ပြုချက်ကို(ဆောက်လုပ်ရေးမှတ်တမ်း).